Adakwala maka '' Ọnụnọ Obodo '' aghụghọ | Martech Zone
Friday, May 2, 2014 Fraịdee, June 6, 2014 Douglas Karr
Ekwentị m na-ada ụda ụbọchị niile. Oge ụfọdụ, mụ na ndị ahịa na-ezukọ n’ọgbakọ mana n’oge ndị ọzọ, ọ na - anọdụ ala meghere n’elu tebụl m ka m na - arụ ọrụ. Mgbe ekwentị kụrụ, ana m elegharị anya ma na-enwekarị 317 koodu mpaghara na-akpọ. Site na kọntaktị karịrị 4,000 na ekwentị m - emekọrịta ya LinkedIn na KpooAchọpụtara m na onye ọ bụla na-akpọ m.
Ma nke a dị iche. Nke a bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-apụ apụ 317 koodu mpaghara iji gbalịa ma melite ohere m na-eburu ekwentị. Na-agwa Bill Johnson okwu - onye ahịa anyị, ọkachamara n’ahịa na-apụ apụ, na onye malitere ya Ahịa, a maara nke a dị ka ọnụnọ mpaghara na ọ bụ ọhụrụ panacea nke outbound akpọ technology.
Lee otu ihe atụ si RingDNA:
Nsogbu dị n'etiti ndị obodo bụ na ọ ga-amalite ozugbo aka n'etiti onye na-ere ahịa na atụmanya site na itinye aka na-emeghị ihe n'eziokwu. N'oge a, ebe ndị na-azụ ahịa na-achọkwu nghọta na ịkwụwa aka ọtọ n'aka ụlọ ọrụ, nke a na-ese okwu.
Ọnụnọ mpaghara bụ juru ebe niile ma na-eto eto na ụlọ ọrụ… na ọ dịkwa aghụghọ na nzuzu n'uche m. Anaghị m eti tie RingDNA - ha bụ otu n'ime narị ndị na-ere ahịa na-ere ngwọta a na nke mbụ m chọtara vidiyo maka Youtube. Ma mgbe vidiyo RingDNA na-agbanye nọmba nke oku ekwentị zara ma ọ bụ laghachi, ọ naghị enye nghọta maka mmebi mebiri ire gị site na iji usoro aghụghọ a.
Doug Hansen, Sr. Onye njikwa nke Akaụntụ Development nke Turn, n'amaghị ama kpọpụtara oku site na onye na-ere ahịa nke buru ụzọ kwalite ha ikike ime obodo. Ozugbo o chereghị ka onye na-ere ahịa na-eguzosi ike n'ezi ihe n'agbanyeghị na ọ mara tupu ihe ha na-eme.
Enwere m ahụmịhe karịa afọ 30 na ahịa, gụnyere ịtụ anya na ekwentị ma nwalee ma eleghị anya ọtụtụ usoro dị iche iche maka ịghaghachi azụ ma ọ bụ nhọta dị ka onye ọ bụla. Mgbe m na-aghọta mma nke nọmba mpaghara ịpụta n'ile idere anya nke onye na-atụ anya atụmanya, achọpụtara m na ịme nke a na-atụkarị anya atụmanya ha duhiere ha na-ewere ma mepụta ihe mgbochi nke negativity nke kwesịrị imebi na mbido. Ọ bụ ezie na usoro ndị a dị irè iji nweta atụmanya ahụ ngwa ngwa, ha na-enyekwa anyị nsogbu na anyị anaghịzi apụta ma na-agbagha ụzọ anyị si enwe mmekọrịta ịtụkwasị obi.
Doug kwuru ya nke ọma. Ọbụlagodi na ọnụọgụ nzaghachi na-abawanye mgbe ị na-akpọ otu koodu mpaghara ahụ, enweghị m ike iche na ị na-emewanye mgbanwe ọnụego ya. M nwekwara ike kwere na ị na-agaghị etinye dum ahịa okirikiri n'ihe ize ndụ site na-amalite na a aghụghọ ụkwụ.
Trusttụkwasị obi na eziokwu bụ isi ihe dị n'ahịa ọ bụla. Ekwela ka ihe ize ndụ ha site na ịmeghe mpaghara mpaghara!
Tags: koodu mpagharaakpọọnụnọ mpagharaọpụpụ ahịaNkwado ire ahịatelefon
Mee 5, 2014 na 9: 11 AM
Ee, nke a bụ otu n'ime aghụghọ ndị ahụ gafere ụbọchị njedebe ya. 18 ọnwa gara aga, nke a ghọgburu m na akpa di na nwunye nke oku, ugbu a ihe ọ bụla nke na-adịghị kụrụ oku na-akpọ Nwela leghaara…
Aug 3, 2015 na 12: 30 AM
Ọ bụ ezie na enwere ike ịhụ nke a dị ka aghụghọ, ọ na-esiri ike ileghara ọnụego ntụgharị azịza bawanye anya ma jiri ya eme ihe bara uru n'oge ọnọdụ ebe A. onye ahịa rịọrọ oku ma ọ bụ B. onye njedebe bụ onye ahịa. Ugbu a, ọ bụrụ na ị na-ere n'ime ụlọ ọrụ C ma ọ bụ akaụntụ ụlọ ọrụ, anaghị eji ọnụnọ mpaghara. Mana n'ihe banyere ntụkwasị obi, ejiri m ngwá ọrụ a na ọnọdụ mbụ (n'oge ahụ na-ere ndị ahịa) na ntụkwasị obi anaghị efu. Ọ ga - ebulite oge niile - “younu bụ ndị obodo” nke m ga - agwa ha gbasara usoro ekwentị anyị na - ejedebe ma jiri okwu “amamiihe mara mma” mechie ahịrịokwu ahụ. Anyị abụọ ga-enwerịrị isi ike ma na-aga n'ihu na ịkpọ oku. Ka ọ dị ugbu a, ọnụego azịza mụbara karịa 400% na ngwa ahụ. 4x ohere imechi azụmahịa. Aga m ewere nsogbu ndị ahụ kwa ụbọchị.
Aug 3, 2015 na 10: 54 AM
E nwere ọtụtụ usoro aghụghọ aghụghọ nke na-eme ka nzaghachi na ọnụego ntụgharị na usoro ọ bụla, Ryan. Take were nsogbu ahụ, abughi m onye ofufe ma ekwenyeghị na ụlọ ọrụ dị mma nwere nnukwu ngwaahịa na ọrụ dị mkpa ịme ihe n'ụzọ a.
Ọkt 6, 2015 na 2:15 PM
Agaghị ele nke a anya dị ka mmebi nke Eziokwu na Caller ID Act nke 2009?
Ọkt 6, 2015 na 11:23 PM
Adịghị m onye ọka iwu, mana ekwenyeghị m na iwu ọ bụla chọrọ ịmanye koodu mpaghara iji dabaa ebe onye na-akpọ ya nọ. Chee echiche banyere ekwentị mkpanaaka gị… Enwere m ike ịnọ na Las Vegas ma kpọọ mmadụ ma "317" ka ga-edebanye aha.